UHlaTun Archives - Xinhua News Agency
All posts tagged "UHlaTun"
Environment, Disasters & Accidents3 weeks ago
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) အနောက်တောင်မုတ်သုံလေသည် မြန်မာနိုင်တောင်ပိုင်းဒေသများသို့ မေလ ၈ ရက်မှ ၁၃ ရက်အတွင်း ဝင်ရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးဦးကာလ စတင်ရောက်ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှထွန်းက ဆင်ဟွာသို့ ယနေ့ ဧပြီ ၂၈ ရက်တွင်ပြောသည်။...
Environment, Disasters & Accidents1 month ago
ဧရာဝတီမြစ်ရေ မြင့်တက်နိုင်သောကြောင့် ထူးခြားမြစ်ရေသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဧရာဝတီမြစ်အထက်ပိုင်းတွင် မြစ်ရေများမြင့်တက်လျက်ရှိသောကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ကျောတလျှောက် ရှိမြို့များတွင် မြစ်ရေများမြင့်တက်နိုင်သည့်အတွက် ထူးခြားမြစ်ရေသတိပေးချက်အား မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ယနေ့ ဧပြီ ၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလှထွန်း က “ဧရာဝတီမြစ်ရေက မတ်လကုန်လောက်ကတည်းကစပြီး မြစ်ရေတွေ မြင့်တက်လာတာပါ။...
Environment, Disasters & Accidents2 months ago
မြန်မာ့ပိုင်နက်ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ငါးသယံဇာတနှင့် ငါးမျိုးစိတ်များ ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ငါးဖမ်းခွင့် ယာယီ ၃လ ပိတ်ထားမည်ဟု ဆို
ရန်ကုန်၊ မတ် ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) ငါးသယံဇာတနှင့် ငါးမျိုးစိတ်များ ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မြန်မာ့ပိုင်နက်ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ငါးဖမ်းခွင့်အား လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ၃ လတာ ယာယီပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေး၊ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဦးစီးဌာန မှ ဒုတိယအမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးလှထွန်းက ဆင်ဟွာသို့ ယနေ့ မတ် ၃၁...
Environment, Disasters & Accidents3 months ago
မုန်တိုင်းငယ်က မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့် အခြေအနေမရှိ၍ အဝါရောင်အဆင့်သတ်မှတ်
ရန်ကုန်၊ မတ် ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနှင့် အီကွေ တာအနီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း သည် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယင်းမုန်တိုင်းငယ်၏ လက်ရှိအခြေအနေသည် မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့် အခြေအနေမရှိ၍ အဝါရောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလှထွန်းက ဆင်ဟွာသို့...
Environment, Disasters & Accidents8 months ago
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) အိန္ဒိယကမ်းခြေ ကိုဝင်ရောက်ပြီး ကုန်းတွင်းဖြတ်ကျော်လျက်ရှိသော အားကောင်းသောမုန်တိုင်း၏ အရှိန်ကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အချို့တွင် မိုးကြီးခြင်း၊ မိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့်အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးထစ်ချုန်းခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ လျှပ်စီးလက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့် ပြည်သူများ သတိပြုနေထိုင်သင့်ကြောင်း မိုးလေဝဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှထွန်းက ဆင်ဟွာသို့ စက်တင်ဘာ ၁၃...
Social, Education & Health1 hour ago
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၌ (၃၉)ကြိမ်မြောက် ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းလောင်း ပူဇော်ပွဲကျင်းပ